DHAGEYSO:- Somaliland oo ka jawaabtay codsigii madaxweyne Farmaajo ee Sucuudiga – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DHAGEYSO:- Somaliland oo ka jawaabtay codsigii madaxweyne Farmaajo ee Sucuudiga
Maamulka Somaliland ayaa jawaab kulul ka bixisay codsi la sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo uu dhawaan u gudbiyay dalka Boqortooyada Sacuudiga Carabiya.
Codsigaasi Farmaajo ee Sucuudiga ayaa ahaa mid ku saabsan joojinta saldhigga militeri oo ay dowladda dalka Imaaraadku Carabta ku dooneyso inay uga sameysato magaalo xeebeedka badda-cas ee Berbera ee maamulka Somaliland.
Wasiir ku-xigeenka madaxtooyadda maamulka Somaliland Axmed Xaashi C/laahi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan jirin cid Somaliland ka joojin karta saldigga ay siiyeen dowladda dalka Imaaraadka Carabta.
Wuxuu sheegay in wax lagu qoslo ay tahay in boqortooyadda Sucuudiga uu ka joojiyo qorshaha ay Imaaraadka Carabta ku difaaceeyso dalkeeda, isagoona ku dooday in Somaliland ay u madax banaan tahay heshiisyada ay la galeeyso dalalka caalamka ah.
Dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka madaxtooyadda maamulka Somaliland Axmed Xaashi C/laahi ayaa madaxweyne Farmaajo kula taliyay inuu shaqadiisa ka dhigo amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, islamarkaana uu faraha kala baxo arrimaha Somaliland.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray wasiir ku-xigeenka madaxtooyadda maamulka Somaliland Axmed Xaashi C/laahi ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaan madaxweyne Farmaajo uu dalka Boqortooyadda Sucuudiga ka dalbaday inay dowladda Imaaraadka ka dhaadhiciso inay joojiso qorshaha ay ku dooneyso inay saldhig militeri kaga sameeysato garoonka Barbera ee magaalo xeebeedka Somaliland.